ကျော်ခ| November 30, 2012 | Hits:1
| | မုံရွာဆေးရုံကြီးပေါ်က ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ မီးလောင် ခံထားရသော ရဟန်းတပါး။ (ဓါတ်ပုံ – မန်းသားလေး / ဧရာဝတီ)
M M November 30, 2012 - 9:05 pm မြန်ရကြားရတာ ရင်ထဲမှာ တကယ့်ကို မကောင်းပါဘူး။ ဒဏ်ရာရသူ ရဟန်းသံဃာနဲ့ ပြည်သူတွေအားလုံး အမြန်ပျောက်ကင်းပြီး ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ၊ ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်ပါစေ။
Reply amt December 1, 2012 - 10:24 pm that’ right.
Reply Ye Lin December 1, 2012 - 5:04 pm စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ ။ရဟန်းသံဃာတွေ အတွက်ေ၇ာ် ပြည်သူ တွေ အတွက် ပါ ထပ်တူ ခံစား ၀မ်းနည်းမိတယ်ဗျာ……..
Reply ထလုံး December 2, 2012 - 5:35 pm မင်းတို့နဲ့တရုတ်တွေအမျိုးတော်တာလား
Reply တဆေ December 2, 2012 - 5:37 pm တရုတ်ကိုကြေက်လို့
Reply z December 2, 2012 - 6:13 pm ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုရင် တာဝန်ယူသင့်သူတွေ တာဝန်ယူရမယ်။ပထမဆုံး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦး
Reply သာဒင် December 2, 2012 - 7:40 pm စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာက ရင်ထဲကစကားပါ။